Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Ronaldo, Haaland, Fernandes, Morata, Kepa, Kamara
HomeWarka Xiisaha LehWararka Suuqa kala iibsiga: Ronaldo, Haaland, Fernandes, Morata, Kepa, Kamara
January 9, 2022 Warka Xiisaha Leh, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Cristiano Ronaldo wakiilkiisa Jorge Mendes ayaa u duulay England si uu kulan arrimaha kacsan ee Manchester United ka taagan la xidhiidha ula yeesho xiddigiisa. (Sun)
Borussia Dortmund weeraryahankeeda Erling Braut Haaland ayaa aaminsan in Manchester City ay xagaaga saxeexiisa isku dayi doonto kaddib markii Man United ay iskaga baxday tartanka loogu jiro. (Express)
Manchester United khadkeeda dhexe ee Bruno Fernandes ayaa noqon doona bartilmaameedka koowaad ee Barcelona haddii kooxdaasi ku fashilanto saxeexa Haaland. (El Nacional)
Alvaro Morata ayaa soo gaabinaya heshiiskiisa amaahda ah ee Juventus si uu Barcelona ugu biiro balse tababare Massimiliano Allegri ayaa diidan inuu bixitaan u ogolaado isaga oo aan bedelkiisa keensan. (AS)
Lazio ayaa xiisaynaysa goolhayaha Chelsea ee Kepa Arrizabalaga balse mushaharkiisa toddobaadlaha ah ee 170,000 ee pound ah ayaa caqabad ku ah. (The Athletic)
Marseille daafaceeda Boubacar Kamara ayaa ka doonaya mushahar 150,000 oo pound ah toddobaadkii kooxdiisa xigta xilli West Ham tartankiisa kula biirtay Newcastle United. (Sun).
Barcelona ayaa bartilmaameedsan doonta saxeexa Adama Traore oo Wolves ka tirsan haddii Ousmane Dembele kooxdeeda ka baxo dhammaadka xilli ciyaareekan taas oo ka dhigan inay Traore tartan kula gali doonaan Tottenham. (Diario Sport)
Atletico Madrid ayaa doonaysa inay heshiis amaah ah Arsenal kaga qaadato daafaca midig ee Cedric Soares iyaga oo qaba aragtida ah inay rasmi ula saxeexan karaan 30 sano jirkaas xagaaga. (Mail)
Fiorentina weeraryahankeeda Dusan Vlahovic ayaa diyaar u ah inuu sugo ilaa xagaaga si uu mustaqbalkiisa go’aan uga gaadho halkii uu January bixi lahaa. (90 Min)
Arsenal ayaa doonaysa Vlahovic balse waxa macquul ah in Ollie Watkins oo Aston Villa ka tirsani kaga haboon yahay weerarkeeda. (Express)
Manchester United daafaceeda dhexe ee Eric Bailly ayaa bartilmaameed macquul ah u ah AC Milan oo doonaysa bedelka daafaca ka dhaawacan ee Simon Kjaer. (Sky Sports Italy)
Birmingham City ayaa soo gabo-gabaynaysa heshiis amaah ah oo ay ku qaadanayso garabka kooxda Man United ee Amad Diallo. (Mirror)
Aston Villa, Crystal Palace, Newcastle iyo West Ham ayaa dhammaantood xiisaynaya saxeexa weeraryahanka kooxda Marseille ee Bamba Dieng. (Sport Witness)
Villa ayaa xiisaynaysa saxeexa khadka dhexe ee Yves Bissouma balse tababaraha Brighton ee Potter ayaa sheegay inaysan iibinayn. (Birmingham Mail)
Barcelona madaxweyne ku xigeenkeeda Rafa Yuste ayaa sheegay inay tahay inay ciyaaryahano kale iibiyaan si ay u diiwaan gashadaan Ferran Torres oo ay Man City kala wareegeen. (Barca Blaugranes)
Barca ayaa la kulmi doonta daafaceeda Sergino Dest oo ay Chelsea doonayso saxeexiisa si uu bedel ugu noqdo garbaha daafaca ee ka dhaawacan ee Ben Chilwell iyo Reece James. (Express)